किन चाहियो हेटौंडामा ‘व्यापारी’लाई आइसोलेसन सेन्टर ? (भिडियोसहित) - शक्तिखबर
Home दृष्टिकोण किन चाहियो हेटौंडामा ‘व्यापारी’लाई आइसोलेसन सेन्टर ? (भिडियोसहित)
शीर्षकअनुसार चोकमा प्वाक्क बोल्न नसके पनि धेरैको मनमा यस्तै तर्कना जेठको उर्लेको रापती झैँ उर्लँदो हो, जनताको गाडी डुबाउने गरी कुखरेनी खोल्सा झैँ बग्दो हो । बुधबार बिहान मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको पल्पसा सभा हलमा पल्पसा आइसोलेसन सेन्टर उद्घाटन भएको छ । ३० बेड क्षमताको सुविधासम्पन्न आइसोलेसन हेटौंडाका अस्पतालहरु भन्दा पनि पायक चोकमा सञ्चालनमा आउँदा केहीलाई राजनीतिक ज्वरोले हनहनी पनि पारेको पनि होला ।
हेटौंडा उपमहानगरका प्रमुख हरिबोल महतले बुधबार बिहान ९ बजे आइसोलेसन उद्घाटन गर्ने तय भएको थियो । मंगलबार साँँझ सबै काम सकेर टोली घर गयो । प्रतीक्षा बुधबार बिहान ९ बजेको भयो । तर प्रमुखज्यूले ‘सरी’ भन्नु भयो रे, उहाँ आउन नसक्नुमा अनेक बाध्यतामध्ये एउटा बलियो बाध्यता पक्कै होला, आउनु भएन । नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सभापति, प्रदेश सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँले आइसोलेसन सेन्टर उद्घाटन गर्नु भयो । इलेभेन्थ आवरमा तोकिएको कार्यक्रममा नजाने हेटौंडाका मेयर मात्र होइनन्, पूर्व मेयर र हालका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि पर्छन्, यसको बारेमा पछि अलग्गै कुरा गरौँला ।
आइसोलेन सेन्टर उद्घाटनमा नेकपा एमाले मकवानपुरकी अध्यक्ष मुनु सिग्देल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रेमबहादुर पुलामी पनि आउनु भयो । मन्तव्य राखेर जानु भयो । नेकपा एमालेकै अर्का अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । उहाँको अनुपश्थिति देखियो । यो मात्रैमा होइन, अन्य घटनाक्रममा पनि श्रेष्ठको फोन नउठेको, बैठकमा आउन नभ्याउनु भएको सचिवालयमा कुरा हुन्थ्यो, बाध्यता र व्यस्तताको परिबन्दमा मान्छे पर्न सक्छ । अर्को कुनै बेला फेरि चर्चा गरौँला ।
किन चाहियो आइसोलेसन ?
प्रदेशस्तरको करोडौँ बजेट भएको हेटौंडा अस्पताल छ, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार हेटौंडा अस्पतालका पनि अध्यक्ष खान तयारै छन् । डाक्टरहरु आएकै छन्, उपचार भएकै छ । गन्ने हो भने पनि हेटौंडा अस्पतालमा झण्डै १ हजार जति अक्सिजन सिलिण्डर भएको फेसबुकमा फोटो हाल्ने सिलिण्डरजस्तै ठिंग उभिएका फोटोवालाहरुले जनाउ दिइरहेका छन् । गौरीटारमा आइसोलेसन सेन्टर छ, आज १९ दिन भयो, सिडियोले फरमान जारी गर्दै कर्रा, सामरी, क्याम्पाडाँडा र रापती पुल कटेर बजार आउन जनतालाई रोकेकै छन्, अरु त अरु दूध र तरकारी किन्नसमेत रोकेपछि कोरोना भागिजान्छ भन्ने परेकै छ । प्रदेश सरकार यहीँ ओहोरदोहोर गरिरहन्छ । निजीक्षेत्रले सरकारलाई जिस्क्याउन खोज्यो, आइसोलेसन चलाएर निउँ खोज्यो, केहीले कुनाकाप्चातिर भन्ने गरेको सुनेको छु । निषेधाज्ञा भएर होला, खुलेर भन्न उहाँहरुलाई पनि गाह्रै छ, फेरि सिडियोसाबको फरमान पनि त मान्नै पर्यो, ७ जना भन्दा भिड नहुनु, सरकारको आदेश सरकार पक्षले नमाने कसले मान्ने ?
केही साताअघि नारायणी यातायातबाट सरोजकुमार खनाल दाइको फोन आयो । दाइको आग्रह थियो, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघसहित निजीक्षेत्रका संस्था एक भयौँ, कोभिड हेल्प डेक्स चलाउने भयौँ, तपाईं पनि सदस्य बस्नु पर्यो । मैले हुन्छ भनेँ, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको बैठक कक्षमा जुट्यौँ । बैठकले सचिवालय बनायो । त्यहाँ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष मणिराज गौतम सदस्य संस्था हुनुहुन्थ्यो । मेरो नाम पनि उहाँहरुले राखेर प्रचारप्रसार गर्नु भयो । पछि अन्जली थापा पनि थपिनु भयो । नेपाल पत्रकार महासंघमा २०५४ सालमा सदस्य बनेयता यसपटकजति मैले र मेरा कारण केही संस्थाका पदाधिकारीहरुले निकै मानसिक तनाव खेप्नु पर्यो । कस्तो पुस्ता उत्पादन गरिएछ र पछिका पत्रकार नेताहरुले उत्पादन गर्नु भएछ, योबारे पनि पछि भनौँला ।
बैठक भएकै दिन कृष्ण अग्रवाल, जो मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमा अध्यक्षका उम्मेदवार र हाल उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा ७ सदस्य सचिवालय बन्यो । सचिवालय बन्दा म पनि राखिएँ, यसपछि धेरै पत्रकारहरुलाई पनि ज्वरो आयो भन्ने बजारमा सुनेको छु, मसँग प्रकट नभएकाले र सुनाउनेहरुले बढाईँचढाइँ गरेर सुनाए होला भन्ने विश्वास गर्दै उहाँहरुप्रति सहानुभूति राखेकै छु । उहाँहरुले गर्नु भएको छोइछितोलाई अमूल्य पुरस्कार मानेर हामी हरेक दिन घरदैलो अभियानमा हिँड्न थाल्यौँ । कोभिड संक्रमितको घरमा पुगेर परामर्श, सेवा गर्न थाल्यौँ ।
घटना १: वडाध्यक्षसहित एक संक्रमितको घरमा हिँड्यौँ, संयोगले वडाध्यक्षज्यूले पनि अभियानको पहिलो दिन पहिलो संक्रमित भेट्ने सूचीमा उहाँकै नाम राख्नु भयो । हामी पुग्दा बिरामी तल्लो घर कि पल्लो घर, पत्तो छैन । भयो अब ? कोरोना संक्रमित यसरी बेखबर बजार कि आफन्तकहाँ ।
घटना २: एउटा परिवारमा पुग्यौँ, बुहारीलाई कोभिड, ससुरालाई पखाला, जेठाजुलाई घाँटी दुखेको । आँगनभरि ६ को हाराहारीमा (मान्छे भएर आधा दर्जन नभनिएको) केटाकेटी खेलिरहेका । मास्क पनि छैन, सतर्कता पनि छैन । सुरक्षित रहन सावधानी पनि छैन । पढेबुझेकै परिवारको यो हालत ।
घटना ३: संक्रमित जेष्ठ नागरिक । न मास्क, न सचेतता । आफ्नो घरै यहीँ छ, कहाँ जाने त भन्दै परररर पड्किने, हामीले बोलेको कान नसुन्ने । मास्क लगाउनु भनेर इशारा गर्दा सासै रोकिन्छ, गाह्रो हुन्छ रे, दैनिक दुई–अढाइसय मानिस त्यही बाटो हुँदै ओहोरदोहोर ।
पहिलो दिनको यो अभियानले हामी आत्तियौँ । ७ सय नागरिक होम आइसोलेसमा कसरी बसेका छन्, ऐनाजस्तै छर्लंगै भयो । भोलिपल्टका घटनाहरु:
घटना १: एउटा घरमा पुग्यौँ, एउटी पढेलेखेकै महिला पढेलेखेकै घमण्डसहित प्रस्तुत हुनुभयो । हामी भेटघाटमा आएको भन्दा किन आउनु प¥यो, हामीलाई थाहै छ नि भन्दै हामीलाई परिचय दिलाउनु भयो । कोरोनावाला बिरामीलाई भेटौँ न भन्दा उहाँले नै हातैले तानेर उहाँ हो भन्दै पुरुषलाई बाहिर ल्याउनु भयो । उहाँहरुलाई सबै थाहा छ भन्ने त परिचय भइसकेको थियो, मात्र मुखमा मास्क नभएको न हो ।
घटना २: ८ दिनअघि पत्नीको निधन, हामी अभियानमा हिँडिरहँदा त्यही गाउँमा पुगेको, आठौँ दिनमा पतिको पनि निधन । यतिखेर अभियानमा हामीसँग हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर पनि जोडिनु भएको थियो । घरमा पुग्दा त सबै हुल बाँधेर बसेका । बाबुलाई छुने, नछुने, घरमा जम्मा भएका सबै एकैठाउँमा । उपमेयर मीना लामाले भन्नुभयो, ‘एउटाले गर्दा सबैलाई सिध्याउला, डर छैन तपाईंहरुलाई ?’ उहाँले आर्मी बोलाउँछु भन्दा पर्दैन भन्ने जवाफ आयो ।
घरदैलो अभियान चलिरहेको थियो । हेटौंडा १, ५, ११, १७ बाहेकका वडाध्यक्षहरु मकवानपुर कोभिड हेल्पडेस्कको कामकारबाहीमा जोडिन सक्नु भएको थिएन । उहाँहरुको अरुचिको स्केल बढ्दो थियो । उपमेयरलाई ‘मेरो वडामा केही छैन, आउनु पर्दैन भन्ने’ वडाध्यक्षहरुलाई सम्मान गर्न बाँकी नै छ । तर वास्तवमै होम आइसोलेसनको अवस्था हामी भोगिरहेका थियौँ ।मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेलाई भेटेर चारनाका थुनेर कोरोना रोकिन्न, होम आइसोलेसनले नै मान्छे सकिने स्थिति छ भन्यौँ । उहाँको छरितो जवाफ थियो, ‘यस्तो बेला वडाध्यक्ष र टोल विकास संस्थाहरु सक्रिय हुनुपर्छ, म मेयरसाब बोलाएर कुरा गर्छु, तपाईंहरुलाई खबर गर्छु ।’
सिडिओ साबले के के गर्नु भयो, भन्नु भयो, एउटा गजबको खबर आयो, ‘सिडिओ, एसपी र वडाध्यक्षहरु घरदैलो अभियानमा जाने ।’ क्या गजब, हामीले गरिरहेको अभियानलाई विरोध गर्नेहरु पनि थिए । अन्ततः ठीकै गरेका रहेछौँ, उनीहरुले नै यो अभियान चलाएपछि हामीलाई हाम्रो काममा गर्व भयो । तर उनीहरु हिँडेको फेसबुकहरुले देखाएको छैन ।
यतिमै कहाँ हो र ?
सरकारी अभियान चल्ने चर्चामा हामी हिँडिरह्यौँ । एउटा अर्को घटना जोडौँ । दुई तले घर । तल दुई कोठामा दुई परिवार । माथि घरबेटी । तल कोरोना भएको मान्छे । बोलायौँ । छिमेकी आउनु भयो । विना मास्क आएपछि भन्यौँ, खोइ मास्क ? छिमेकीले भन्नु भयो, ‘उहाँलाई कोरोना हो र ?’ एउटै घरको कोठामा बस्नेलाई कोरोना भएको खबर छैन, घरबेटीसहित सबैको एउटै शौचालय ।
सोच्यौँ, होम आइसोलेसनले पो मान्छे सकिने हुन् कि ? हेटौंडा–८ कमाने गयौँ, त्यहाँ कोरोनाले मान्छे भसक्कै । ओहो, भएन, यस्तो होम आइसोलेसन भन्दा फरक, सुरक्षित चाहिन्छ भनेर लबिङ ग¥यौँ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवाल, नारायणीका सरोज खनालले यसलाई जोडदारसँग उठाउनु भयो । दुई जनप्रतिनिधि (प्रमुख)ले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको आइसोलेसनको विरोध नै गर्नु भयो, नाम पछि भनौँला । तर हामीले सोच्यौँ, होम आइसोलेसनका नाममा कोरोना घट्दैन । मकवानपुरका सिडिओसँग अनुमति लिएर पल्पसामा आइसोलेसन चलाउने काम भयो ।
हेटौंडामा प्रदेशस्तरको सरकारी अस्पताल र सुविधासम्मपन्न गौरीटार आइसोलेसन सञ्चालनमा छ । निजी अस्पतालहरुले पनि कोभिड १९ को उपचार गरेकै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई असुविधा महसुस गर्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले निजीक्षेत्रको संयोजनमा हेटौंडामै ३० बेडको सुविधासम्पन्न आइसोलेसन सञ्चालन भइछाड्यो । आइसोलेसन उद्घाटन गर्दै नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सभापति एवम् बागमती प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्रबहादुर बानियाँले सर्वसाधारणलाई खोप दिनुको सट्टा सरकार कोरोनाको आडमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न लागिरहेकोे बताउनु भयो ।
आइसोलेसन सञ्चालनले राज्यको सेवासुविधा पहुँच बाहिर रहेका सर्वसाधारणलाई सहज हुने प्रदेश सांसद एवम् राजनीतिक दलका नेताहरुको बुझाई छ । नेकपा एमाले मकवानपुरकी अध्यक्ष मुनु सिग्देल यो विषम् परिस्थितिमा सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
३० बेड क्षमताको पल्पसा आइसोलेसनमा चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले २४ सै घण्टा सेवा दिनेछन् । सरकारले बजारमात्रै बन्द गराएर कोरोना संक्रमणदर कम नहुने बताउनुहुन्छ, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवाल । निजीक्षेत्रका तर्फबाट सर्वसाधारणका लागि अस्पतालकै जस्तो सेवा आरम्भ भएको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी भएकाले हेटौंडामा कोही पनि कोभिडका बिरामी उपचार र आइसोलेसन सेवाबाट वञ्चित नहोउन् भनेर सञ्चालन गरिएको अभियानको नागरिकस्तरबाट पनि प्रशंसा भएको छ ।
यति पढेपछि तपाईंले जवाफ पाउनु भयो त ? तपाईंको प्रश्न थियो नि: किन चाहियो हेटौंडामा ‘व्यापारी’लाई आइसोलेसन सेन्टर ? सकभर जवाफ पाउनु भयो होला, पाउनु भएन भने अर्को ब्लगमा म फेरि लेखुँला, आफ्नो पेशै यस्तो छुच्चो त म क्यारुम ?
अध्यक्ष मुनु सिग्देल
नेकपा एमाले मकवानपुर
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रेमबहादुर पुलामी
नेपाली कांग्रेस मकवानपुर
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे
बागमती प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्रबहादुर बानियाँ
मकवानपुर कोभिड हेल्पडेस्क
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
हेटौंडा उपमहानगरका प्रमुख हरिबोल महत
३० बेड क्षमता
अघिल्लो सामग्रीकोरोनाका सङ्क्रमितको उपचारमा लागेको खर्च सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
यसपछिको सामग्रीआगामी जेठ ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा थपियो
कांग्रेसको सातौँ पटक महाधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन
बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने , आजै तीन मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने तयारी
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाक्यद्वारा पदबाट राजीनामा
नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता
अखबार शक्ति खबर - २ हप्ता अगाडि 0
नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बिहीबार जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन अपानीमा स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोका साथै केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरी कार्य विभाजन तोकिएको...